- Total $16.985 trillion
China cuntoka bari asia
Shiinaha, [k] si rasmi ah Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha (PRC), waa waddan ku yaal Bariga Aasiya. Waa waddanka adduunka ugu dadka badan, oo ay ku nool yihiin qiyaastii 1.4 bilyan oo qof sannadka 2019. Waxay ku dhowdahay qiyaastii 9.6 milyan kiiloomitir oo laba jibbaaran (3.7 milyan mi2), waa waddanka saddexaad ama afraad ee adduunka ugu weyn bed ahaan. Dawlad hal xisbi ah oo uu hogaaminayo Xisbiga Shuuciga Shiinaha (CCP), waxay maamushaa awooda 22 gobol, shan ismaamul goboleed, afar degmooyin toos loo maamulo (Beijing, Tianjin, Shanghai, iyo Chongqing), gobollada maamulka gaarka ah ee Hong Kong iyo Macau. Goobta Shiinaha waa mid aad iyo aad u kala duwan, oo ka soo jeeda Gobi iyo Taklapan oo ku yaalla waqooyiga qulqulka si kaymaha koonfureed ee koonfurta woqooyi. Buuraleyda Himilaya, Karakoram, Pamir iyo Tian Shan waxay kala duwanyihiin Shiinaha oo ka kala yimi Koonfurta iyo Bartamaha Aasiya. Daadadka Yangtze iyo Yellow River, oo ah kii saddexaad iyo lixaad ee ugu dheer adduunka, siday u kala horreeyaan, waxay ka soo baxaan xeebta Tibetan si ay u noqdaan xeebaha bariga ah ee aadka u qulqulaya. Xeebta Shiinaha ee ku taalla Badweynta Baasifigga ayaa 14,500 Km (9,000 mi) dheer waxaana xiran Bohai, Yellow, East Sea iyo Shiinaha Koonfurta Shiinaha. Shiinuhu wuxuu isku xiraa xudduuda Kazakhstan ku yaala Eurasian Steppe, kaas oo ahaa xidhiidhkii isgaadhsiinta ee u dhaxeeya Bariga iyo Galbeed tan iyo Neolithic oo loo marey waddada Steppe - awoowgeed ee Waddada Casriga ah.
Waddanmaha deggan ShinihaEdit
South Korea 120000+
Si kastaba ha ahaatee, Shiinuhu waa maalglaha ugu sareeya adduunka ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo ganacsigeeda, iyada oo $ 52 bilyan oo maal gashan 2011 oo kali ah; waa shirkad wayn oo tiknoolajiyada tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxayna si weyn ugu maalgashaa tamarta dib loo cusboonaysiin karo mashaariicda. Sannadka 2015, in ka badan 24% tamarta Shiinaha ayaa laga soo qaatay ilaha dib loo cusboonaysiin karo, halka ugu badnaan awoodda korontada ku jirta: wadarta guud ee la rakibay 197 GW waxay China ka dhigaysaa korontada korontada ugu wayn ee korontada adduunka ah Shiinaha ayaa sidoo kale leh awooda awooda ugu weyn ee lagu rakibay habka fiilooyinka loo yaqaan 'photovoltaics solar system' iyo nidaamka tamarta dabaysha ee adduunka. Sanadkii 2011, xukuumadda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku maalgelinayso afar trillion yuan (US $ 619 bilyan) oo ah mashruucyada biyaha iyo mashruucyada biyo-qabadka mudo toban sano ah, iyo in la dhiso dhismaha ka hortagga daadadka iyo nidaamka ka hortagga abaarta sannadka 2020. Sanadka 2013, Shiinaha waxay bilaabeen dadaal shan sano ah, $ 277 bilyan oo doolar si loo yareeyo hawada hawada, gaar ahaan waqooyiga dalka.
Dastuurka Shiinaha ayaa caddeeyay in waddanka uu "hogaamiye" ka yahay Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha (CPC) Maadaama uu Shiinuhu yahay dawlad-goboleed hal-dhinac ah, Xog-hayaha Guud (hoggaamiyaha xisbiga) wuxuu leeyahay awooda iyo awoodda ugu saraysa dowladda iyo xukuumadda u adeegta hoggaamiyaha ugu sarreeya Nidaamka doorashadu waa sharraxaad. Xubnaha Golaha Deegaanka waxaa si toos ah loogu soo doortaa, iyo heerarka sare ee Congress-ka ee dadka loo gooyo Golaha Qaranka ee Qaranka (NPC) waxaa si dadban loo soo doortaa Congress-ka dadka heerkiisu hooseeyo. Nidaamka siyaasadeed waa mid baahsan, hoggaamiyeyaasha gobollada iyo kuwa gobollada ayaa leh tiro madaxbanaan oo madax-bannaan. Siddeed kale oo xisbiyo siyaasadeed ah, ayaa wakiil ka ah Majmaca iyo Shiineeysiga Siyaasadeed ee Shiinaha (CPPCC). Shiinaha waxay taageertaa mabda 'Leninist' oo ah "dimoqraadiyad dimuqraadi ah", laakiin naqdiyeyaashu waxay sharaxayaan Golaha Shacabka ee la soo doorto oo loo yaqaan "shambe shaambe".
PRC waxay leedahay xiriir diblomaasiyadeed oo leh 175 dal iyo safaaradaha safaarada 162. Sharcigeeda waxaa ka soo horjeeda Jamhuuriyadda China iyo dalal kale oo yar; sidaas darteed waa gobolka ugu weyn oo ugu badan dadweynaha oo leh aqoonsi xaddidan. 1971-kii, PRC wuxuu beddelay Jamhuuriyadda Shiinaha oo ah wakiilka kaliya ee Shiinaha ee Qaramada Midoobay iyo mid ka mid ah shanta xubnood ee joogtada ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Shiinaha wuxuu sidoo kale ahaa xubin hore iyo hogaamiye dhaqdhaqaaq aan Sharciyeynin, wuxuuna wali u tixgelinayaa inuu u doodayo dalalka soo koraya. Brazil, Ruushka, Hindiya iyo Koonfur Afrika, Shiinaha waa xubin ka mid ah kooxda BRICS oo ah dhaqaale weyn oo soo kordhay waxayna martigeliyeen shirkii saddexaad ee rasmiga ahaa ee kooxda Sanya, Hainan bishii Abriil 2011.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shiinaha&oldid=233889"
Last edited on 6 Abriil 2022, at 11:41
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Abriil 2022, marka ee eheed 11:41.